भारतमा तहल्का मचाउदै नेपाली चेलि ! गरिन् २ खेलमा ६ गोल - News20 Media
भारतमा तहल्का मचाउदै नेपाली चेलि ! गरिन् २ खेलमा ६ गोल
January 30, 2020 N20LeaveaComment on भारतमा तहल्का मचाउदै नेपाली चेलि ! गरिन् २ खेलमा ६ गोल
एजेन्सी । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ले भारतीय महिला फुटबल लिगको सुरूवाती २ खेलमा ६ गोल गरेकी छिन्। साम्बाले एक ह्याट्रिकसहित ६ गोल गरेकी हुन्। गोकुलम केरालाकी स्ट्राइकर सावित्राले मंगलबार केन्क्रे एफसीविरूद्धको खेलमा ५ गोल गरिन्।
उनले खेलमा ७, १९ र पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा गोल गरेर ह्याट्रिक गरिन्। उनले दोस्रो हाफमा थप दुई गोल गरिन्। ४८ र ६१ मिनेटमा उनले गोल गरेकी हुन्। खेलमा गोकुलमले केन्क्रेलाई १०-१ गोलले पराजित गर्‍यो। यसअघि गोकुलमले पहिलो खेलमा श्रीभूमी क्लबलाई १-० ले पराजित गरेको थियो।
सो खेलमा सावित्राले नै निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। लिगको समूह बीमा रहेको गोकुलम ६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। सावित्रासँगै नेपालकी मिडफिल्डर अनिता बस्नेतले पनि भारतीय लिग खेलिरहेकी छिन्। अनिता सेथु एफसीमा आबद्ध छिन्।
लिगमा १२ क्लबबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ६–६ क्लबलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ। साम्बा आबद्ध गोकुलम समूह बीमा छ। गत सिजनको विजेता सेथु भने समूह एमा छ। गोकुलम प्लेअफ जितेर लिगका लागि छनोट भएको हो।
समूहका शीर्ष २ टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। लिगको उपाधि भिडन्त फागुन पहिलो साता हुनेछ। गत सिजन साम्बाले सेथुलाई उपाधि जिताउन उत्कृष्ट खेलेका थिइन्। सेथुले समूह चरणमा ५ जितसहित लगातार ७ खेलमा विजयी हासिल गरेर लिगको उपाधि जितेको थियो। त्यसक्रममा सेथुले ४५ गोल गरेको थियो। ४५ मध्ये साम्बाले १५ गोलसहित तीन ह्याट्रिक गरेकी थिइन्।
सरस्वती माताको दर्शन गर्दै हेर्नुस आज माघ १६ गते बिहिवारको राशिफल
January 30, 2020 January 30, 2020 N20
शरद भेषवाकर घाइते भएपछि त्रिकोणात्मक श्रृंखलाका बाँकी खेल गुमाउने, खकुरेलले खेल्ने सम्भावना
February 7, 2020 February 7, 2020 N20
दक्षिण अफ्रीकाविरुद्धको टेस्ट सिरिज इङल्याण्डले जित्यो
January 28, 2020 N20